musha Europe vatambi Jean Reno Zvekuchecheche Nyaya Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Jean Reno Biography inokuudza Chokwadi pamusoro peNyaya yake Yehucheche, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Mhuri, Mudzimai, Mararamiro, Net Kukosha uye Hupenyu hwePamoyo. Muchidimbu, isu tine ngano pfupi yehupenyu hwake rwendo, kubva panguva semwana kusvika mukurumbira wake.
Kubva Cradle kusvika Mukurumbira waJean Reno.
Ehe, iwe neni tinoziva kuti zvakaoma kuudza iyo akanakisa aJean Reno mafirimu, kungoti beacuse iye akangonaka zvakadaro. Kana iwe usati wanzwa nezvake, hapana chikonzero chekushushikana. Iye mutambi weFrance uyo akaonekwa mumafirimu mazhinji akabudirira eHollywood uye eEuropean. Pasina imwezve ado, ngatitangei.
Jean Reno Yehucheche Nyaya:
Kune ekutanga maBiography, ane mazita akazara; Juan Moreno y Herrera-Jimenez. Mutambi weFrance akaberekwa pazuva re30th raJuly 1948 kuSpanish vabereki (kubva kuAndalucía) muMaguta makuru eMorocco, Casablanca.
Jean ndiye dangwe kumhuri yake uye akakurira aine hanzvadzi yake chete, María Teresa y Herrera-Jiménez. Kunyangwe akaberekwa saJuan Moreno, akazopedzisira achinja zita rake kunzi Jean Reno.
Mufananidzo wekutanga waJean Reno achiri mudiki.
Mutambi-akaberekerwa muMorocco aive nendangariro dzakanaka dzehudiki hwake munzvimbo yaakaberekerwa. Akapedza mazuva ake ekutanga pagungwa neshamwari, achitiza kupisa kwezuva reMoroccan. Jean Reno akapedzawo mazuva ake achiona nyeredzi dzekuAmerica saJohn Wayne, William Holden, Marlon Brando naJimmy Stewart nevatambi veFrance vakaita saJean Gabin naLouis Jouvet.
Mudiki Jean Reno achiri kuMorocco.
Zvinosuruvarisa, mazuva ekutanga aya akaparadzwa apo Hondo Yemazuva matanhatu yakarova nyika yake. Iri ndiro gore iro vabereki vaJean Reno vakatiza nyika yavo yekuFrance.
Zvinokufadza iwe kuziva kuti Jean Reno akawedzera French Twist kuzita rake reSpanish. Pakanga paine shanduko diki kubva pane izvo vabereki vake vakamutumidza izvo zvinova; Moreno y Herrera-Jiménez kuna Jean Reno. Kugadziriswa kwezita iri kwaive mune kumwe kukunda moyo weindasitiri yemamuvhi muFrance.
Vabereki vaJean Reno ndiSpanish. Ivo zvizvarwa zveSarlúcar de Barrameda naJerez de la Frontera muAndalucia. Mune ma1940s, amai vake nababa vakanga vatamira kuCasablanca kuMorocco, uko kwakaberekerwa Jean Reno.
Ane makore gumi nemanomwe, Jean Reno akange atamira kuFrance, kwaakasimudzira nyika ndokuva mugari weFrance. Saka, isu tinogona kutaura zvakajeka kuti iye mutambi weMoroccan-French ane chizvarwa cheSpanish.
Mepu inoratidza yaJean Reno's Midzi.
Kuna Jean Reno, achikurira mumhuri yenyukireya yenhengo ina, vabereki vaviri nevana vaviri; zvakaita kuti chikafu chive nyore. Kare kumashure, vabereki vaive vasina kupfuma zvakanyanya. Baba vaJean Reno vaive linotypist. Basa rake mukambani inodhinda bepanhau. Zvichakadaro, amai vake vakatsigirawo mhuri nebasa rake rekusona.
Zvinosuruvarisa, Jean Reno akarasikirwa naamai vake achiri mudiki. Zvinoshungurudza sezvazvinoratidzika, mhuri iyi yakarwa kuburikidza nedambudziko ravo.
Kutsvaga kwekutanga kwesimba remunhu, sekusimudza munguva, kunoponesa pfumbamwe. Ane makore gumi nemanomwe, Jean akatamira kuFrance, achifunga kuzvibatanidza nebasa remumafirimu. Jean Reno akadzidza kuita kuC Cours Simon Chikoro cheDrama.
Iye French Actor panguva yake yechikoro mazuva muFrance.
Semudzidzi akangwara, aigona kwazvo muchikoro uye akahwina moyo wevadzidzisi vake. Dzidzo yaJean Reno yekondari yaive kuLycée Lyautey muCasablanca, Morocco.
Pakarepo mushure mekutamisirwa kuFrance, Jean Reno akashanda muchiuto cheFrance nemauto kwemakore mana (4) ekuva French Citizen. Nekudaro, sejaya jaya, paaidzidza, Reno akaedza kuwana raramo Joggling pakati pemabasa. Aimbove accountant, mutyairi uye kunyangwe mukuru wechivanhu.
Jean Reno achishandira mauto eFrance.
Zvizhinji gare gare, mushure mekuwana ruzivo rwezvidzidzo mukutamba, akatanga paTv yemuno nepamitambo. "Iyo Hypothesis yeiyo Yakabiwa Painting" bhaisikopo, yakava yekutanga Reno yakazara-yakazara chirongwa.
Jean Reno's Biography- Mugwagwa Unoenda Mukurumbira Nhau:
Kunyangwe aive mutambi ane tarenda, Jean Reno theatre yakanga isiri inonakidza. Kusvikira asangana nemudiki director director, Luc Besson, uyo akabatsira kusimudzira kugona kwake kwekuratidzira zvakanyanya. Mushure meizvozvo iyo bhaisikopo yakanzi, Subway yakamuzivisa muFrance yese muna 1985.
Mufananidzo wekutanga waJean nemutungamiriri wake wekutanga wemamuvhi, Luc Benson.
Munguva pfupi yakwana, mazhinji mapurojekiti matsva akatevera, kusanganisira basa rake mune inonakidza mhosva "Nikita". Iyo purojekiti yakaratidza mufananidzo wakasurukirwa wekuuraya uyo waizove chiratidzo chake kune mamwe makore akawanda.
Mufananidzo wakazotevera waJean Reno naLuc Benson.
Jean Reno's Bio - Kumuka Mukurumbira Nhau:
Kuchinja yake mumwe-uye-iye-akafanana-chimiro mufananidzo, Jean akatora chinhanho mumhando dzakasiyana dzemamuvhi, senge mutambo wenhoroondo, bhaisikopo rekumadokero, melodramas, uye kunyangwe mumafirimu eanodanana.
Iyo blockbuster yaive "Mission: Hazvigoneke" nyeredzi Tom Cruise. ndiyo yekutanga Reno yekutanga bhaisikopo, rinotungamirwa naBrian De Palma. Mamwe mafirimu akatonyanya kubudirira, saGodzilla, Ronin uye Iyo Crimson Rwizi. Kunyangwe iyo Ronin bhaisikopo ichionekwa senge rakanakisa basa raReno muzana rapfuura.
Mufananidzo waJean Reno pakunaka kwake.
Panguva yekumisikidza Bio yake, Reno haana kumira mukuenderera mberi nekushamisa vateereri vake nemamwe marudzi mazhinji emamuvhi kubva muzana rino ramakumi maviri nerimwe. Zvimwe zvese, sekutaura kwedu, ichave nhoroondo.
Jean Reno Kufambidzana Nhoroondo uye Kuroora:
Kusiyana Alpacino, akaravira nyika yemubatanidzwa wewanano uye senge Tom Hanks, akawana vanopfuura mumwe chete.
Pamberi pemukurumbira wake, mutambi wechiFrance akaroora kekutanga kuna Geneviève. Ivo vaviri vaive nemwanasikana, Sandra (akazvarwa 1978), uye mwanakomana, Mickael (akazvarwa 1980). Kufanana nababa vake, Mwanasikana waJean Reno, Sandra zvakare mutambi. Nehurombo, kufambidzana kwaReno nekunze kwemhuri kwakagumisa muchato naGeneviève mukadzi wake wekutanga.
Sezvineiwo, nyaya yaJean Reno yaive nemufananidzo wePoland Muenzaniso, Nathalie Dyszkiewicz, uyo akazove mukadzi wake wechipiri. Vese vadikani vaive nemwanakomana, Tom (akazvarwa 10 Ndira 1996), uye mwanasikana, Serena (akazvarwa 28 Chikumi 1998). Zvisinei, vaviri vacho vakaparadzana muna 2001.
Jean Naiye Ex-Wife, Natalie.
Musi wa29 Chikunguru 2006, Reno akaroora kechitatu, kumuBritish modhi uye mutambi wedzinza rePoland, Zofia Borucka, kuLes Baux-de-Provence City holo. Mhemberero yemuchato yakashongedza akambokwikwidza semutungamiriri wenyika Nicolas Sarkozy semurume wake wepamoyo.
Reno nemukadzi wake wepolish, Zofia Boruck.
Gare gare, Zofia naReno vakagamuchira mwanakomana wavo wekutanga, Cielo, akazvarwa muna Chikunguru 2009 muNew York City. Zvakare, wavo wechipiri mwanakomana Dean akazvarwa munaGunyana 2011.
Jean Reno Hupenyu Hwemhuri:
Yakanga isiri nguva dzose pamba-inotapira-imba kunaJean. Baba vake vaiita senge vane masimba masimba uye vaive nehupenyu hwaJean Reno hwakarongwa kunze kwekuita kuve mugadziri. Ipo mai vake, avo vaive vasina kusimba, vakaita kuti hupenyu hwavo hupfupikiswe. Akafa neCancer paReno achiri kuyaruka. Mhuri yakanamatira pamwe uye gare gare yakatsigira Jeans kuita zviroto.
Reno anopenga maererano nevana vake uye kuti apedze nguva yakawanda navo, anongopfura mafirimu maviri chete pagore. Nekudaro, zvinogona kutaridzika kunge zvisingafadzi kune vateveri nevatungamiriri vemafirimu, mufaro kumukadzi wake nevana.
Jean Reno nemukadzi wake nevana.
Zvimwe Pamusoro paBaba vaJean Reno:
Kunyangwe baba vane rudo, sezvazvingaite. Baba vaJean vaive nenzira yavo isingawanzo yekuratidza rudo rwakadai. Aive linotypist nehunyanzvi uye haana kutsigira rake rekuita basa pakutanga. Baba venyeredzi baba vaida kuti Jean Reno ave dhizaini. Akaroora aine vana vaviri, Reno ari iye wedangwe.
Zvimwe Pamusoro paamai vaJean Reno:
Kunyangwe zvakawanda zvisingazivikanwe nezve zita raamai vake. Akanga achinyatsotsigira mhuri yake uye akakuita kukoshesa kwake. Vana vake vaviri vaimuda zvakanyanya. Aive musoni nebasa. Asi nechirwere chake, aisakwanisa kurarama kwenguva yakareba zvakakwana. Akazofa neCancer.
Zvizhinji nezveJean Reno's Sibling:
Hunhu hweMoroccan-French hwaingova nehama uye hanzvadzi chete, María Teresa Y Herrera-Jiménez. Jean Reno nehanzvadzi yake vakarererwa muKaturike. Ivo vaviri vakadzidza Spanish kubva kuvabereki vavo uye chiArabic neFrance vachiri kukura kuMorocco.
Zvimwe Zvakawanda Nezvehukama hwaJean Reno:
Mhuri yemutambi ane tarenda yakachengeta yakaderera chimiro; Kunyanya kubva kune vezvenhau. Pamwe nekuda kwekusagadzikana kwavo uye kugara vachitamiswa. Kunyangwe iye achifanira kuva nehama, zvakadaro isu hatigoni kunongedzera hapana.
Jean Reno Hupenyu hweMunhu:
Iyo yeFrance bhaisikopo nyeredzi inozivikanwa kwazvo nehunyanzvi hwepfungwa uye yakanatswa Maonero. Anoda kufamba uye kuona mafirimu nevatambi vaanoda saVincent Cassel naCarole Bouquet. Reno anofarirawo kudya chikafu cheThai uye akatofunga kuti achavigwa kupi - Baux-de-Provence - unova musha mudiki unodikanwa nemoyo wake.
Iyo bhaisikopo Star pazororo.
Reno zvakare ane mitauro yakawanda uye anobatana mushe nevateveri vake pane yake yemagariro midhiya mubato. Haafarire iyo American nyeredzi system.
Jean Reno Mararamiro:
Sezvo awana mitoro kubva pakutanga kwebasa rake rekuita, Jean Reno anokwanisa kutenga zvivakwa zvemhando yepamusoro nemota. Parizvino, akaendesa Cadillac SRX crossover uye akati wandei mamodheru eBentleys. Nhasi, Reno anochengetedza dzimba nhatu muParis, Malaysia neLos Angeles.
Mufananidzo waJean Reno nemumwe weBentleys yake.
Jean Reno Net Kukosha:
Wakambozvibvunza here kuti akapfuma sei Jean Reno, sekupedzisira 2016? Sekureva kweTherichest masosi, inofungidzira kuti mari yaReno inokosha madhora makumi manomwe emamiriyoni, mari yakawanikwa kuburikidza nebasa rake rekuita. Hupfumi hwake hunonyanya kubva mukuita kwake mumamuvhi mazhinji. Mari yake yegore rose ya70 yaive zvakare $ 2017.
Jean Reno Untold Chokwadi:
Mushure mekuita ruramisiro kune bio yaJean Reno uye nhoroondo yehupenyu, zvakakosha kutaura mashoma maidi iwe ausingazive nezve iyo Moroccan-akaberekerwa nyeredzi bhaisikopo.
Chokwadi # 1: Chiratidzo cheBonde:
Jean Reno akatorwa sechiratidzo chebonde muFrance nekuti anotenda kuti vakadzi ipapo vanonzwa kuti anotaridzika semurume anozvibata. Iyi pfungwa yakabva kune yeruzhinji kumeso; mafirimu ake anofanira kunge akamupa.
Chokwadi # 2: Dambudziko rekutanga rehutano:
Pazera remakore gumi nerimwe, zvakaonekwa kuti Jean aive neAsthma, uye Chiremba Akamurayira mweya wemugomo wakachena. Mushonga uyu wakamuporesa mushure mekubatwa nechirwere cheAsthma, kunyangwe akashaya makore maviri echikoro chesekondari.
Chokwadi # 3: Perfume Brand:
Nyeredzi ine mukurumbira zvakare Yakaburitsa chizoro chinonzi Jean Reno anokuda muna 2004.
Chokwadi # 4: Awards:
Akambogamuchira iyo National Order yeMerit, France yechipiri-yepamusoro-soro kukudzwa kwevanhu, kubva panguva iyoyo-mutungamiri Jacques Chirac muna 2003. Akawanawo François Truffaut Award (2012) uye European Film Academy Achievement muWorld Cinema Award (2000).
Mufananidzo waJean Reno panguva yemumwe wemubairo wake.
Chokwadi # 5: Kusarudzwa:
Jean Reno akasarudzwa kuCésar Awards ye Best Actor / Akanyanya Kutsigira Actor, European Film Awards Vateereri Mubairo we Best Actor (2001)
Jean Reno's Bio Dhata
Zita rizere: Juan Moreno y Herrera-Jiménez
Zita rekudanwa: Jean Reno, Moreno, Juan
Zuva rekuzvarwa: 30 Chikunguru 1948
Nzvimbo yekuzvarirwa: Casablanca, Morocco
Dzidzo: Cours Simon Chikoro cheDrama
Vanun'una: María Teresa (Hanzvadzi) María Teresa Y Herrera-Jiménez
Wife / Ex-Wife: Zofia Borucka (M. 2006), Genevieve Reno
(M. 1977-1995), Nathalie Dyszkiewicz (M. 1996-2001)
Mwanakomana (s): Mickael Reno, Cielo Reno, Dean Reno, Tom Reno
Mwanasikana (s): Sandra Moreno, Serena Reno
Zuva Chikwangwani (Zodiac): Leo
Hobbies: Kufamba, Kudya, Kuona Mafirimu
kukwirira: 6 ft 2 inches (1.88 m)
Net Worth: USD 70 mamirioni approx (2016)
Muhoro: $ 10,350,000 pagore (2017)
Social Media: Instagram (officiel_jeanreno), Twitter: (@ JeanReno48)
Jean Reno agara achiratidza kukosha kwake mumabhaisikopo kunyangwe hazvo iyo firimu yakaipa kana kuti rangano rakasarudzika. Vazhinji vechidiki vatambi vanotevera tsoka yake vanoziva iyo kukosha kwekuve Jean Reno mukuda kwavo kwema cinema. KuAmerican, anoraira kuremekedza kwakafanana senge Sylvester Stallone.
Isu tinoshuvira kuti unakirwe nekuverenga nyaya yaJean Reno Yemwana. Takaona kuti sei kunyangwe anga aine mamiriro akakwirira ekufa kwaamai vake uye akazoenda kuFrance. Akagara kuburikidza nezviroto zvake zvekuve mugadziri uye nekuchengetedza kwake kwakanangana, mukurumbira uye kukosha mune indasitiri yemamuvhi kunyangwe kusvika pakukwegura
Chido chedu chemwoyo wose kuti iwe uite iro zuva nesu kune mamwe anonakidza ehupenyu chokwadi uye nyaya dzehupenyu sezvavanowonekera. Nekudaro, iwe ungadai wakacherekedza chero kukanganisa mukutakura kwedu? Usambozeza kutaura nesu.
Javier Bardem Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi